बाढीपीडितको नाममा विद्यार्थीलाई स्कुलको यस्तो उर्दी
तराईमा बाढी पहिरो पीडितलाई राहत दिने भन्दै राजधानीका केही निजी विद्यालयले विद्यार्थीलाई अनिवार्य रकम ल्याउन उर्दी गरेका छन् । निजी विद्यालयहरुले विद्यालयको सयोग भन्दै सरकारलाई बुभाएर नाम कमाउन विद्यार्थीसग रकम उठाएका हुन् । सांसद गीता रानाको ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुलले हरेक बर्ष विद्यार्थीलाई..
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पञ्चायतदेखिको १३ अर्ब आठ करोड बेरुजु
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेरुजु १३ अर्ब ८ करोड ३९ लाख ३३ हजार पुगेको छ ।आजको नयाँ पत्रिकामा यो खबर छ । त्रिविमा पञ्चायतकालदेखिको बजेट फस्र्योट नहुँदा आर्थिक वर्ष ०७३(७४ सम्ममा १३ अर्बभन्दा बढी बेरुजु देखिएको हो । त्रिविले बेरुजु फस्र्योटलाई प्राथमिकमा राखेर यस्ता काममा सक्रिय हुने..
पढेको बिर्सने बानी छ ? यसो गर्नुहोस् मज्जाले सम्झिन्छ
प्रविधिक शिक्षाको विकासमा अवरोध गर्न पाईदैनः पूर्व संचार मन्त्री पोखरेल
काठमाडौं । नेकपा एमालेका स्थायी कमिटि सदस्य शंकर पोखरेलले नेपालका हजारौं विद्यर्थीहरु प्राविधिक शिक्षा पढ्न विदेश पलायन भएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । राजधानीमा मंगलबार जनआकाश साप्ताहिकको दशौं वर्ष प्रवेश गरेको उपलक्षमा बोल्दै उनले सो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । पूर्व संचार मन्त्री समेत..
काठमाडौँ ।विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम एसएसआरपी असफल भएका बेला सरकारले लागु गरेको त्यही प्रकृतिको एक खर्ब दस अर्ब रुपैयाँको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम एसएसडिपी पनि असफल हुने चेतावनी शिक्षाविद्हरुले दिएका छन् । एएसडिपी संघीयताको भावनाविपरित आएकाले सफल हुन नसक्ने उनीहरुको भनाई छ..
उडिरहेको जहाजको ट्वाइलेटमा आफ्नै बिद्यार्थीसँग यौन सम्बन्ध राखिन् यि कामुक शिक्षिकाले
एजेन्सी । सेक्सले मानिसको जीवनमा विशेष महत्व राख्ने गर्छ । तर कतिपय अवस्थामा गरिएका त्यस्ता हर्कतहरु रोचक समाचार पनि बन्ने गरेका छन् । जसमध्येको एक हो उडिरहेको प्लेनको ट्वाइलेटमा एक छात्रसँग शिक्षिकाले यौन सम्बन्ध राखेको कुरा । इंग्ल्याण्डको ब्रिस्टलमा फिजिक्स पढाउने २८ वर्षीया एलीनोर विल्सनले..
जेबी अधिकारीको अध्यक्षतामा काठमाडौं जिल्ला विद्यालय भलिबल कमिसन गठन
काठमाडौं । जेबी अधिकारी (दीपक) को अध्यक्षतामा कुल १३ सदस्यीय समितिको काठमाडौं जिल्ला विद्यालय भलिबल कमिसन गठन गरिएको छ । नेपाल विद्यालय भलिबल कमिसन अन्तर्गतको काठमाडौं जिल्ला विद्यालय भलिबल कमिसनको उपाध्यक्षमा रिता राई दाहाल,सचिवमा शिवप्रसाद अर्याल र कोषाध्यक्षमा प्रदीप श्रेष्ठलाइ चयन गरिएको छ..
दुर्घटना न्युनीकरणका लागि ९ हजारलाई सडकमै शिक्षा
बुटवल । पश्चिम क्षेत्रमा सवारी दुर्घटनाको डरलाग्दो तथ्यांक सार्वजनिक गरेकोे ट्राफिक प्रहरीले दुर्घटना न्युनीकरणका लागि अभियान थालेको छ । अभियानको २० दिनसम्म झन्डै नौ हजार चालकलाई सडकमा नै ट्राफिक शिक्षा दिईएको छ । पश्चिम क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले गत २५ असारमा सुरु गरेको..
युनाईटेड एजुकेशनल एकेडेमीले सुरु गर्यो आईइएलटीएस( IELTS) संचालन
काठमाडौं । राजधानीको चाबहिलमा युनाईटेड एजुकेशनल एकेडेमीले बिदेश गएर पढ्न चाहने बिद्यार्थीलाई मध्यनजर गरि आईइएलटीएस( IELTS) संचालनमा ल्याएको कन्सल्टेन्सीका प्रवन्ध निर्देशक रामहरी खड्काले जानकारी दिए । यस कन्सल्टेन्सीले विदेश पढ्न जाने बिद्यार्थीलाई उचित परामर्श दिने, आईइएलटीएस( IELTS) का तयारी..
भाइस नेपालले भोलि होटल मल्लमा अस्ट्रेलियन एजुकेशन फेयर २०१७ आयोजना गर्दै
काठमाडौं । अस्ट्रेलियाको बिभिन्न युनिभर्सिटीमा बिगत ३ बर्ष देखि विद्यार्थीहरु पठाउदै आएको भाइस नेपालले साउन १३ गते काठमाडौंमा अस्ट्रेलियन एजुकेशन फेयर २०१७ आयोजना गर्ने भएको छ। अस्ट्रेलियामा उच्च अध्यनका लागि जान चाहने विद्यार्थीलाई ध्यानमा राखेर भाइस नेपालले होटल मल्लमा एक दिने शैक्षिक..
रहिनन् डिना वाङदेल
काठमाडौं । कतारस्थित भर्जिनिया कमनवेल्थ युनिभर्सिटीको कला विभागकी प्रमुख डिना वाङदेलको मंगलबार अमेरिकामा निधन भएको छ । पारिवारिक स्रोतका अनुसार रुघाखोकी बिग्रिएपछि वाङदेलको शल्यक्रिया गरिएको थियो । उपचाररत अवस्थामा मेनेन्जाइटिसबाट ग्रसित उनको मंगलबार नेपाली समयअनुसार बिहान ११ः३० बजे निधन..
अस्ट्रेलियन एजुकेशन फेयर साउन १३ गते काठमाडौंमा
मङ्लबार, साउन १०, २०७४ मा प्रकाशित
काठमाडौं,१० साउन । अस्ट्रेलियाको बिभिन्न युनिभर्सिटीमा बिगत ३ बर्ष देखि विद्यार्थीहरु पठाउदै आएको भाइस नेपालले यही आउँदो साउन १३ गते काठमाडौंमा अस्ट्रेलियन एजुकेशन फेयर २०१७ आयोजना गर्ने भएको छ। अस्ट्रेलियामा उच्च अध्यनका लागि जान चाहने विद्यार्थीलाई ध्यानमा राखेर भाइस नेपालले होटल मल्लमा..
पढ्दै नपढेको विषयको प्रश्नप्रत्र !
इलाम,८ ईलाम क्याम्पसमा अध्ययनरत स्नातक तह दोस्रो बर्षका विद्यार्थी र प्राध्यापकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विषयको नाम र पाठ्यक्रम परिवर्तन गरेको परीक्षामा बसेपछि मात्र थाहा पाएका छन् । ईनरनेसनल पोलिटिक्स विषयको परीक्षा दिन गएकालार्य पोलिटिक्स अफ नेपाल विषयको प्रश्चपत्र बाँडिएपछि मात्र..
१ वर्षमा ५० हजार बिद्यार्थी बिदेशतिर
बिहिबार, साउन ५, २०७४ मा प्रकाशित
काठमाडौं । एक वर्षमा ५० हजारभन्दा बढी नेपाली बिद्यार्थीले बिदेशमा अध्ययन गर्न शिक्षा मन्त्रालयबाट ‘नो अब्जेसन लेटर’ लिएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकको फ्रन्टपेजमा उल्लेखित समाचार अनुसार अध्ययनका लागि भिषा आवेदन गर्दा आर्थिक वर्ष २०७३र७४ मा मात्र डेढ अर्ब रुपैयाँ बिदेशिएको छ । गत वर्ष ३२ हजार ४८९..
शिक्षित होईन सभ्य बनौँ
बुधबार, साउन ४, २०७४ मा प्रकाशित
-सन्जिता पराजुली । हो हामी गर्ब गर्छौ शिक्षित भनि कोही यहाँ व्यपारी छौँ, कोही शिक्षकशिक्षिका, कोही सरकारी निकायमा काम गर्छौ भने कोही संघ संस्थामा सम्बन्धीत छौँ, र कोही गफाडीका रूपमा चिनिन्छौँ । चाहे जहाँ भए पनि जेमा काम गरे पनि जस्का लागी गरे पनि हामी शिक्षालाई महत्व दिन्छौँ । भनिन्छ “ शिक्षा मात्र..